Global Voices teny Malagasy · 5 Jona 2019
05 Jona 2019
Tantara tamin'ny 05 Jona 2019
Tontolon'ny teny Tsimané
Mediam-bahoaka 05 Jona 2019
San Borja, Bolivia – nanatevina laharana ny Rising Voices tamin'ny 2014 Marobe ireo vondrom-piarahamonin'ny indizeny any ambanivohitr'i Tsimané ao amin'ny faritra Beni ao Bolivia no mbola tsy manana fahafahana mampiasa aterineto sy telefaona finday. Na antenaina aza ny mety hanentsenan'ny gevernemanta vaovao ireny lavaka be amin'ny fifandraisana ireny amin'ny fametrahana...
Lira, Uganda – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2014 Mitàna toerana lehibe amin'ny fampitàna ireo torohay tena ilaina ao Lira, Ogandà ny onjampeom-piarahamonina. Ny Theatre Technology House dia namorona tantara iray filalao an-tsehatra entina hanabe ireo mpihaino ao an-toerana, arahana fanambaràna ho an'ny daholobe. Ity tetikasa ity dia mitondra singa...
Karachi sy Islamabad, Pakistana – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2014 Pakistan dia firenena iray matetika aseho amin'ny fomba tsy rariny eny anatin'ireo fampahalalambaovao iraisampirenena mahazatra. Miaraka amin'ny iray amin'ireo fomba fitantarana misy amin'izao fotoana izao mifantoka amin'ireo olan'ny fandriampahalemana sy ny fanaovana an-tendrony (extremism), misy ny hetaheta te-hahazo vaovao...
Estancia, Filipina – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2014 Ny Novambra 2013, namely tamin'ny fomba nahatsiravina vondrom-piarahamonina maro nanerana an'i Azia Atsimo-Atsinanana ny Rivomahery Haiyan, niaraka tamin'ny hery izay mbola tsaroan'ny ain'ireo mponina maro mandritra ny andom-piainany. Ireo tanàna tao Filipina, toa an'i Estancia, izay tena voadona mafy tokoa, ary efa...
Ankizivavy mpikatroka ao Kyrgyzstan
Bishkek, Kyrgyzstan – nanatevina laharana ny Rising Voices tamin'ny 2014 Matetika no latsaka tsy hita any anatin'ny boky sy ireo media ao Kyrgyzstan ny zavabitan'ireo vehivavy, ary sarotra be ny hahita ireo torohay momba ny zon'ny vehivavy. Taorian'ny atrikasa iray nampiantranoin'ny Bishkek Feminist Collective SQ, vondrona iray najoron'ireo zatovovavy mpikatroka...
Tetikasa Famporisihana ireo Cloghers
Phnom Penh, Kambodza – nanatevina laharana ny Rising Voices tamin'ny 2014 Matetika no antsoina am-pitiavana hoe “Cloghers” ieo vehivavy bilaogera ao Kambodza, na izany aza anefa, mbola tena voatokana ho an'ireo mponina an-tanandehibe sy ireo manana fahafahana tsaratsara kokoa mahazo ireny teknolojia ireny ny fanoratana bilaogy. Ny Cambodian Center of...
Yadiko Uruk + ireo zanakalahin'i Yadiko
Cabildo Milan, Kolombia – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2014 Tany amin'ny andian-taona 1980 tany dia mpikaroka avy any ivelany no nanatontosa ireo horonampeo sy horonantsary am-polony maro mirakitra ireo tantara fahagolan'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany Witoto – M+n+ka , hatramin'ny fanangonana antontan-kevitra momba ireo fombafombam-pivavahana masina antsoina hoe Yadiko. Ity...
Ireo vondrom-piarahamonina indizeny Aché ao Paraguay – nanatevina laharana ny Rising Voices tamin'ny 2012 Sarotra ny lalàna nodiavin'ireo vazimba teratany Aché tao Paragoay, ary hatramin'ny andro ankehitriny aza izay ahitàna betsaka ity tantara manahirana momba ireo olana mifandray amin'ny zon'ny fananantany ity. Nandritra ny taonjato faha-20, niaritra fandripahana iray nahatsiravina...
Córdoba, Argentina – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2013 Ao Córdoba, Arzantina, misy andiany iray mpirotsaka an-tsitrapo tonga mamangy ny hopitalim-panjakana fitsaboana marary saina izay nahalalan-dry zareo misimisy kokoa ny fiainana manokan'ny marary maro. Hitan-dry zareo fa betsaka tamin'ireo fomba fijery tety ivelany ataon'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana an'ireo izay nampidirina...
Fahaizana mamaky Media & Familiviliana ny Fanoherana
Sarajevo, Bosnia sy Herzegovina – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2014 Efa manangasanga any ny vanimpotoana fifidianana ho an'ireo mpifidy ao Bosnia sy Herzegovina, izay midika fa hanototra ireo mpifidy ato anatin'ny volana efatra ho avy ny vaovao sy fandalinana momba ireo mpirotsaka hofidiana ary ireo olana goavana eo am-pelatànana....